I-SYMFONISK iishelufa zeencwadi, sivavanye i-IKEA-Sonos umfelandawonye | Iindaba zeGajethi
I-SYMFONISK iishelufa zeencwadi, savavanya umanyano lwe-IKEA-Sonos
Abo bethu abalithandayo eli lizwe lobuchwephesha basekhaya bebethetha ixesha elide malunga nokuba lulunge kangakanani na olu manyano phakathi IKEA kunye noSonos, eyona ifenitshala ithandwayo kunye nenkampani yokuhombisa kunye nenye yeefemu ezinconywayo luluntu ezonwabela isandi esidibeneyo nesisemgangathweni. Ewe, sele sinazo phakathi kwethu iimveliso zokuqala ezizalwe zezi zinto zidibeneyo, Sine-SYMFONISK Shelf kunye nesibane se-SYMFONISK ukuvavanya olu manyano phakathi kwe-IKEA kunye ne-Sonos ngohlalutyo lwethu, uza kuyiphosa? Andiyiqondi…
Njengokuba kuqhele ukwenzeka kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu, sikhethe ukwenza uhlalutyo lwevidiyo ngaxeshanye kweli nqaku ungalibona kwisiteshi seYouTube kwaye sisebenza njengesihloko sokufunda kamva. Njengesiqhelo, kungcono ukuyibona kunokuba uyifunde, ke sicebisa ukuba ngaphambi kokuba uqalise olu kufundo olunzulu lohlalutyo, uthathe ithuba lokungabikho kwebhokisi kunye novavanyo lwesandi esilwenzileyo kwimveliso ISYMFONISK evela kwi-IKEA kunye neSonos. Ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kukuxelela ukuba sizifumene njani ezi zithethi.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ikea encinci, uninzi lweSonos
2 Izithethi ezininzi, kunye nethala leencwadi elincinci
3 Isandi kunye nokunxibelelana, ngoncedo lweSonos
Uyilo kunye nezixhobo: Ikea encinci, uninzi lweSonos
Siqala ngowokuqala weemveliso, ishelufu kwaye, ewe, sivula olu hlalutyo kunye noyilo lwalo. Yakhelwe kwi-PVC kwaye inengubo yokwaleka ngaphambili, egubungela izithethi, into eqhelekileyo. Inobungakanani beesentimitha ezingama-23 x 21 x 32 kubunzima bebonke obuyi-3,11 kilograms. Yinto yokuqala eyothusayo, kwaye yiyo inobunzima kakhulu uthathela ingqalelo ukuba yiplastikhi, kwaye oku kwesithethi luphawu lomgangatho. Yinto ezinye izithethi ezivela kwinkampani ye-Sonos ekwabelwana ngayo, ubunzima buqinisekisa abaqhubi abalungileyo ngaphakathi kunye nesandi esichazwe ngakumbi ngaphandle kwengxolo kunye neentshukumo.
Imibala: Mnyama nomhlophe
Izixhobo: Iplastiki kunye nelaphu
Sineenguqulelo ezimbini ezifanayo kumandla kodwa imibala eyahlukeneyo, sinokukhetha uhlobo olumnyama kunye nohlobo olumhlophe, into ethi IKEA ikwamkele nakwizithethe zeSonos, esisebenzela zonke izithethi zayo kwezi zimbini zemibala. Iphakheji ikwabandakanya iincwadi zemiyalelo yeklasikhi, intambo yokubambisa yokuqhagamshela umbane oza ngee-shades ezifanayo kwisithethi kunye nodidi lwe-5e ye-ethernet cable kwimeko apho kufuneka siyidibanise ngaphandle kweWiFi. Ngaphandle kokuthetha kwinqanaba loyilo, iyazikhusela ngokucacileyo kwaye ngumanyano phakathi kweIkea kunye neSonos. Inokubekwa ngokuthe nkqo nangokuthe tye kwaye amaqhosha amathathu angaphambili asivumela ukuba siphathe umculo ngokulula nangempumelelo.
Izithethi ezininzi, kunye nethala leencwadi elincinci
Sifumene isithethi ebendinethemba elincinci ngaso, kodwa uSonos undikhumbuze kwakhona ukuba naphina apho usibeka khona isandla sakho, senza ubugcisa. Ukuyifaka ngaphakathi kulula njengangaphambili, nangona kunjalo IKEA Kwimizamo yayo engapheliyo yokukunika iimveliso ngamaqhekeza, ikukhumbuza ngokukhawuleza ukuba ukuba ufuna ukunamathela eludongeni, kuya kufuneka uthenge naziphi na izixhasi zayo ngokwahlukeneyo, Nokuba ngumlobothi olula ukusuka kwi-6 Euro okanye inkxaso epheleleyo (kucetyiswa ngakumbi) nge-14 Euro. Ixabiso omele ulongeze kwisithethi.
Sineshelufu enkulu kwisithethi, kodwa incinci kwishelufu. Njengeetafile zebhedi encinci encinci ilungile, kodwa kufuneka ulibale ngokubeka nasiphi na isibane, isiseko sokutshaja seQi okanye ngamafutshane, nantoni na ofuna ukuyiphalaza kwishelufa ngokungenasiphelo, isizathu sikukuba nje ukuba uchithe kunye nevolumu umculo, kwaye ndiyakuxelela ukuba unentambo okwexeshana, uyakuphelela emhlabeni ubuncinci, ngaphandle kokukuxwayisa kuqala ngendudumo. Isiphumo: Kungcono ukuba udibanise nenye ifanitshala ye-IKEA enjengeishelufa ze-KALLAX kwaye ulibale ukuyisebenzisa njengethala lokusetyenziswa rhoqo.
Isandi kunye nokunxibelelana, ngoncedo lweSonos
Ukuba sowoyisile umothuko wokuyifaka kwaye uyazi ukuba uza kuyibeka phi, unokuphumla, ngoku kuza indawo elula. Kulabo banandipha izixhobo zikaSonos kunye nabantu abangabaziyo, kunyango lokwenyani. Landa nje usetyenziso lwakho lwe-Sonos kwiVenkile yeGoogle Play okanye kwiVenkile yeApple ye-iOS kwaye uqhubeke ukhangela isithethi esitsha. Ucofa iqhosha lokuDlala njengoko usetyenziso lubonisa kwaye kwimizuzwana engaphantsi kwe-10 uyifakile kwaye uyasebenza, ubukhulu becala, kuya kubakho uhlaziyo olulindileyo. Kungekudala emva koko, ungaqhubeka nokuseta igumbi ukuze isandi esihlakaniphile sifikelele kuyo yonke indawo ngokulinganayo.
Unxibelelwano olungenazingcingo nge WiFi (hayi iBluetooth)
Ungqamaniso kunye Spotify
RJ45 izibuko - ethernet
Ngokubhekisele kumgangatho wesandi, ndiyamangaliswa xa kuthathelwa ingqalelo ixabiso. Ngokukhawuleza uyaqonda ukuba kunjalo Sonos kuba nangona enika isandi Yomelele kakhulu kumanqanaba aphezulu, awunakuxabisa ikhefu kuyo. Nangona linyathelo elingaphantsi kwe-Sonos One (ethi, ngendlela, ixabise kabini), ii-euro ezingama-99 zamaxabiso zichanekile ngokupheleleyo ngomgangatho wesandi esivelisayo, ungasathethi ke ukuba uSonos uyakuvumela ukuba udibanise izithethi kunye I-Spotify yethu, iiakhawunti zeDeezer nokunye okuninzi. Imodeli ye-IKEA SYMFONISK isinika amava onke e-Sonos ngokulula kwifenitshala ye-IKEA, eyenza ukuba kufumaneke kwabo bafuna ukuchitha kancinane uthotho lweemveliso kude kube ngoku zazisikelwe umda kancinci.
Le shelufu ye-SYMFONISK evela kwi-IKEA kunye ne-Sonos iye yaba yinto enye kwi-ofisi yam, Awunakho ukubonelela ngaphezulu kokuncinci, kwaye uyilo, izixhobo, isiqinisekiso kunye nomgangatho wesandi ngee- € 99 kuphela ayiqhelekanga xa sithetha ngomsindo. Andikwazi ukusilela ukucebisa le SYMFONISK evela kwi-IKEA kunye ne-Sonos njengendlela yokuqala ukuba uyayixabisa yonke into onokuyinikwa yimveliso ye-Sonos, ngesiqingatha seendleko ze-Sonos One, esele ikhona Andiceli olunye uphawu ukuba luyiphucule, kodwa endaweni yoko luthelekise. Zifumaneka nakweliphi na iziko le-IKEA ukusuka kuma-99 euros.
SYMFONISK ishelfu evela kwi-IKEA kunye ne-Sonos
Izixhobo kunye noyilo ukuthelekisa ixabiso
Ukusetyenziswa ngokulula kunye nokunxibelelana okukhulu
Ukufakwa ngokulula yi-IKEA
Ixabiso elinqabileyo lemveliso enjalo
Sukushiya i-IKEA ngaphandle kweebakaki zodonga, ezahlukileyo
Ayisebenzi kangako kwithala leencwadi
Ngaba unemakrofoni kunye nomncedisi we-Alexa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-SYMFONISK iishelufa zeencwadi, savavanya umanyano lwe-IKEA-Sonos
I-Fresh´n Rebel CLAM, ithembisa ukuguquguquka, intuthuzelo kunye nomgangatho [Uhlalutyo]